[Ngokukodwa] 'Ukukhululwa kweNew Mutants' kuyabanjwa (kwakhona) - iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	[Kukhethekileyo] 'Ukukhululwa kweNew Mutants' kuFunyanwa (kwakhona)
[Kukhethekileyo] 'Ukukhululwa kweNew Mutants' kuFunyanwa (kwakhona)
by UDavid N. Grove Aprili 17, 2019
by UDavid N. Grove Aprili 17, 2019 1,904 imbono
Libala malunga nango-Agasti 2, 2019, umhla wokukhutshwa eMntla Merika Iintshukumo ezintsha. Umhla wokukhutshwa Iintshukumo ezintsha, esekwe kwiqela leMarvel Comics elinelo gama, iphinde yahanjiswa, ngokutsho komthombo eFox.
Umhla wokuqala wokukhutshwa Iintshukumo ezintsha, eyaqala ukufota ngoJulayi ka-2017, yayingu-Epreli 13, 2018. Oku kwahanjiswa ngoFebruwari 22, 2019, ngaphambi kokufika kumhla wakutshanje.
Umhla wokukhululwa omtsha awukagqitywa Iintshukumo ezintsha, ngokutsho komthombo weFox. "Ifilimu ishukunyiswa kukudibana kweDisney-Fox," utsho umthombo. “Bafuna ukulinda de ukudityaniswa kugqitywe ngaphambi kokuba bathathe izigqibo malunga nokukhululwa kweefilimu ezithile, kubandakanya Iintshukumo ezintsha. "
Ngelixa umthombo wenqabileyo ukutsho nokuba awuzukukhutshwa nini umhla Iintshukumo ezintsha izakususwa ngokupheleleyo kwi-2019, oku kungabonakala kuyinto eqinisekileyo, ngenxa yokuba iFox, kuthiwa, isafuna ukuphinda kuqaliswe izinto, ezingekaqhubeki. Umhla omtsha wokukhutshwa uzakuba kude ne-Agasti, utshilo umthombo. Ayikho enye into eyaziwayo okwangoku. ”
Iintshukumo ezintsha, echazwe njengefilimu eyoyikisayo kuhlobo lwe-superhero, ikhokelwa nguJosh Boone, obhalele yena kunye noKnut Lee kwaye uthelekise ifilimu Baby Rosemary kwaye nokudangazela.
UAnya Taylor-Joy, Maisie Williams, uCharlie Heaton, uHenry Zaga, uBlu Hunt, kunye noAlice Braga inkwenkwezi kwifilimu, egxile kwiqela lolutsha oluncinci olugcinwe kwindawo efihlakeleyo kwaye kufuneka balwe ukuze bazisindise.